China Plansifter manufacturing and Factory | Chinatown
Ny planifter andian-tsarimihetsika FSFG dia iray amin'ireo vokatra fototra ampiasainay noho ny hevitra vaovao. Izy io dia afaka manasivana sy mametaka tsara ireo akora granular sy pulverulent. Amin'ny maha milina fanasiana lafarinina premium azy dia mety ho an'ireo mpanamboatra lafarinina izay manodina ny varimbazaha, ny vary, ny varimbazaha durum, ny rai, ny oat, ny katsaka, ny buckwheat, sns. Amin'ny fampiharana, ity karazan-tsiranoka fikosoham-bary ity dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny varimbazaha voafafy sy ny fanivanana fitaovana afovoany, ary koa amin'ny fanasivanana ny lafarinina. Ny famolavolana sieving isan-karazany dia mifanaraka amin'ny andalana fanasivanana samihafa sy ny fitaovana mpanelanelana.
1. Ny haben'ny sivana sieve dia misy amin'ny 640 × 640mm sy 740 × 740mm.
2. Ny rafitry ny planifter dia vita amin'ny takelaka vy noterena, raha ny rindrina boaty anatiny kosa dia omena amin'ny vy tsy misy fangarony. Ny fanjifana azo ovaina dia azo zakaina miaraka amina SKF (Suède) karazana fitambaran-doha misy karazany roa.
3. Ny zoro sieve dia vita amin'ny hazo nafarana izay ny atiny sy ny ivelany dia samy voakaly amin'ny lamination melamine plastika. Izy ireo dia azo aidina sy azo ovaina. Ireo zana-kazo sieve dia miaraka amina fantsom-by vy. Ny fizarana tsirairay dia mihombo amin'ny alàlan'ny metaly vy sy ny visy mikrometrika tsindry avy eo ambony. Mora sy haingana ny fanovana ny drafitra fanasivanana ny planifter raha ilaina izany.
4. Ny fivoahan'ny fitaovana fanasiana lafarinina dia misy satroka plastika mainty ao anatin'ny velaran'ny fitsofana gravity.
5. Ny sivana SEFAR dia raisina.
6. Ny sivana NOVA dia misy ihany koa ho an'ny planifter. Ny sieve anatiny vita amin'ny aliminioma dia afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fanadiovana ambonimbony kokoa, ary ny velarany lehibe sy ny firafiny siantifika dia afaka manome fahombiazana sieving lehibe amin'ny toerana voafetra.
7. Ireo singa rehetra mifandray amin'ny fitaovana mivantana dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony na fitaovana hafa misy kalitao, miantoka ny mari-pahaizana lehibe momba ny fahadiovana.
8. Ny drafitra ataontsika dia misy rafitra maodely arakaraka ny filanao. Hita amin'ny planifter fizarana efatra, drafitra enina fizarana ary drafitra fizarana valo ianao mba hahafahanao manao ny ankamaroan'ny habaka misy.
9. Ny rindrina anatiny sy ny varavarana dia miaraka amina teknika fanamafisam-peo mandroso, manalavitra ny tranga fanondranana hamandoana amin'ny ambaratonga lehibe.
(singa) Sieve Haavo (mm) Sieve Frame Haavo
(tsy misy fefy sieve ambony)
(mm) Min Haavo an'ny fametrahana
(mm) Haingam-pandeha lehibe
(r / min) Faritra fanasivanana
Ny masinina dia entin'ny motera izay napetraka ao anatin'ny fefy lehibe ary ampifandanjana tsy refy. Ny milina tsirairay dia misy sivana 4, na 6, na fizarana 8 ao anatiny. Ny fitaovana samihafa dia mikoriana mankamin'ny faritra samihafa amin'ny lalany manokana. Araka ny volavolain'ny tsirairay ho an'ny fitaovana isan-karazany, ny sivana dia manasiaka akora granular samy hafa amin'ny andalan-tsoratra manaraka amin'ny milina fanaovana lafarinina rehefa mandeha ny milina iray manontolo.
Sivana fanefitra sy fefy fandefasana
Volavola tsy manam-paharoa amin'ny fampidirana ny volavola lehibe sy ny fizarazarana ho lasa rafitra lehibe, ary ny fitaovana dia mampiasa baffle fiara kely.
sieve frame frame dia manamboatra fantsom-bolo vita amin'ny alim-bolo alim-bolo marevaka tsy misy fantsom-bolo, manangana rafitra fifandraisana mortise-tenon eo anelanelan'ny takelaka ambony sy ambany.
Tabilao sieve hazo toradroa, mifono plastika, tsy mahazaka, misoroka ny fahasimbana mando, zorony mifono vy amin'ny hamafin'ny tanjaka, habe mety, fifanakalozana mety. Ny mekanisma fanidiana tsindry mitsangana dia tsotra sy azo antoka, asa tsara amin'ny frame mba hisorohana ny famoahana vovoka.
Manadio mpanadio sy mpanadio lovia
Ny mpanadio sivana dia afaka misoroka ny fanakanana sivana, ary ny mpanadio lovia dia afaka manosika ny fitaovana hihetsika tsara.
Suspender fitaovana vita amin'ny vera.
Manaraka: Plansifter Cleaner